YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, April 22
ခင်ညွန့်ရဲ. ၅.၈.၁၉၈၉ နေ့ အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ထောင်ဒဏ် အနှစ်(၂၀)ချမှတ်
စစ်ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်နှင့် နိုင်ငံတော်ငြီမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ. အတွင်းရေမှုး(၁) ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့်ရဲ. ၅.၈.၁၉၈၉ နေ့ အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ထောင်ဒဏ် အနှစ်(၂၀) (၁၉၈၉ ခုမှ ၂၀၀၈ ခုထိ) ချမှတ်ချင်းခံခဲ့ရသော ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၏ ကိုယ်ရေး အကျဉ်းဖော်ပြချက်-စစ်ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်.ဟာ ဆရာကြီးဦးဝင်းတင် အပါအဝင် ဒီိမိုကရေစီရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူပေါင်း များစွာကို ယုတ်မာတဲ့စွတ်စွဲချက်တွေနဲ့ စွတ်စွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများပြုလုပ်ကာ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏နိုင်ငံတော်အာဏာသီမ်းပိုက်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ စာအုပ်မှ —
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/22/20140အကြံပြုခြင်း
ဦးဝင်းတင် ၏ ကျန်ရစ်သူမိသားစုအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်အားပေး
၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ရုံးတွင် အလံကို တစ်ဝက်ချ
ဦးဝင်းတင်အတွက် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ပြုလုပ်ဖို့ မန္တလေးမြို့မှာ ပြင်ဆင်
အဖွဲ့ချုပ်နာယက ဘဘဦးဝင်းတင်၏ ဈာပနကျင်းပရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းရန်အတွက် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။